Tusaya - Androidsis | Androidsis
Gelinta ayaa noqotay habka ugu caansan ee loo isticmaalo cunnada maanta. Ha ahaato dhageysiga muusikada, ciyaarista ama daawashada taxanaha iyo filimada. Taasi waa sababta aan u hayno qayb dhan oo loogu talagalay dhammaan wararka ku saabsan qulqulka Android. Marka ha moogaanin mid ka mid ah wararka ku soo kordha aaggan.
Araajida, talooyinka, wararka ama tabaha la socoshada socodka. Haddii aad raadineyso inaad dhageysato muusig, ciyaar ciyaar ama aad ka daawato dhammaan noocyada kala duwan ee taleefankaaga Android, waxaad ka heli kartaa wax walba oo la xiriira qulqulka qeybtaan.
Waa maxay kanaalada TV -ga ee aan ku daawan karo Photocall TV
by Ignacio Sala samee horas 3 .
Markay timaado daawashada telefishinka moobilkaaga, sanad walba codsiyo cusub iyo / ama bogag internet ayaa soo baxa ...
XNUMX -ta beddel ee ugu sarreeya Spotify ee loogu talagalay Android
by Pablo sanchez samee 3 maalmood .
Spotify waa barnaamijka qulqulka muusigga oo aad ugu wanaagsan dadka isticmaala Android. App ah oo ...
Waa maxay Rakuten TV, imisa ayuu ku kacayaa iyo imisa kanaal ayaa na siiya?
Rakuten wuxuu ku dhashay madal fiidyow qulqulaya oo dalab ah, kaas oo aan ku kireysan karno oo ku iibsan karno filimada, badiyaa ...
Sida loo helo Netflix iyada oo aan haysan kaarka deynta
Netflix wuxuu ku dhashay bakhaar fiidiyoow ah oo guriga gaarsiiyay. Markii internetku sii kordhayay, Netflix wuxuu noqday barxad ...
Spotify waxay cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda desktop iyada oo qaab cusub loo shaqeynayo
Spotify ayaa hadda ku dhawaaqday cusbooneysiinta barnaamijka desktop-ka iyadoo nashqad cusub iyo taxane cusub ...
Ilaa dhowr bilood kahor, sida kaliya ee adeegsadayaashu ugu raaxaystaan ​​qulqulka muusikada qeexitaan sare ...
Tan iyo markii la bilaabay Disney + bishii Nofeembar 2019 ee Mareykanka, waxyaabaha laga heli karo bartaan marwalba ...
Spotify wuxuu ahaa adeegii uhoreeyay ee muusikada geeyo suuqa, iyo sida WhatsApp oo kale, way guuleysatay oo ...
Kordhinta adeegyada fidinta fiidiyowga, waqti ayaa yimid markii ay tahay inaan ...
Mar labaad, ragga ka socda Amazon waxay noo soo bandhigeen dalab aannaan seegi doonin, ...
Kahor intaan la bilaabin Latin America, adeegga fiidiyowga ee 'Disney', Disney +, wuxuu lahaa 73 milyan oo macaamiil ah,…